यस्तो छ पूर्व सप्तकोसी को अवस्था, कतो ओटा ढोका खोलिए? - Mitho Khabar
यस्तो छ पूर्व सप्तकोसी को अवस्था, कतो ओटा ढोका खोलिए?
June 17, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on यस्तो छ पूर्व सप्तकोसी को अवस्था, कतो ओटा ढोका खोलिए?
सुनसरी । देशभर शक्तिसाली वर्षाका कारण बाढीपहिरो गइरहेको छ । दर्जनौ बेपत्ता भए कयौँको घर डुबानमा छ । बुधबार मात्र झन्डै एक सय जनाको हाराहारीमा बेपत्ता छन् । यता पूर्वमा भने खासै असर देखिएको छैन ।
तर पनि पूर्वका सबै कोशीहरुको संगमस्थल सप्तकोसी क्षेत्रमा भने पानीका बहाब बढेको छ । बिभिन्न ७ सहायक नदीहरुको भेट डोलीने सप्तकोसीका सबै शाखाहरुमा पानीको बहाव उच्च भएको देखिएको छ । निरन्तर वर्षाका कारण पानीको बहाव उच्च भएपछि नदी आसपासका बस्ती समस्यामा परेका छन् ।
सप्तकोसीमा बुधबार बिहान मापन गर्दा पानीको बहाव ६१ हजार एक सय ४५ क्यूसेक रहेको थियो । बहाव बढ्दै गएपछि कोसी ब्यारेजका १२ वटा ढोका खुल्ला गरिएको ब्यारेज प्रशासनले जनाएको छ । नदीको बढ्दो बहावलाई मध्यनजर गर्दै नदी आसपासका बस्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाको भनाई छ ।
एसपी थापाका अनुसार अनुसार सम्भावित क्षति न्यूनीकरण तथा उद्दार तयारी प्रभावकारी बनाइएको छ । यसका लागि बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको पनि एसपी थापाले जानकारी दिए । सप्तकोसीकै सीर हुदै बग्ने सहायक नदी मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण नेपालको पश्चिम भूभाग सिन्धुपाल्चोकले ठूलो जनधन गुमाउनु परेको छ ।
धन कमाउन दुबई गएका एकै परिवारका ४ जना दाजुभाइको नि’ध’न
आफ्नै नाबालिक छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने बुवा पक्राउ